समाचार अपडेट छोराहरूलाई एक्लाएक्लै छाड्दा... छोराहरूलाई एक्लाएक्लै छाड्दा...
काठमाडौं । तपार्इं आ�ना बालबच्चालाई छुट्टीका दिन कतै घुमाउन लैजादै हुनुहुन्छ वा राजधानीको भृकुटीमण्डपभित्र रोटेपिङ खेलाउने उद्देश्यले लिएर जा�दै हुनुहुन्छ वा एक्लै पठाउदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! किनभने, कांग्रेस नेताका भाइभारदारले वर्षाैंदेखि ठेक्कामा घुमाइरहेको सो रोटेपिङ यसै साता प्रहरीले बन्द गर्नुका साथै ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
यसै साता एकातिर माओवादीको विस्तारित बैठक चलिरहेको थियो, अर्कातिर छेवैमा रहेको चिल्ड्रेन पार्कमा रोटेपिङ घुमिरहेको थियो । प्रहरीले विस्तारित बैठककै बेला रोटेपिङको ढोकामा ताल्चा लगाएर आधा दर्जन कांग्रेसी ठेकेदारलाई पक्रेको हो । तर, सरकारमा माओवादी रहेको र रोटेपिङ कांग्रेसले घुमाएका कारण उनीहरू समातिएका चाहि� होइनन्, बरु यसका पछाडि एउटा भयंकर दुर्घटनाले काम गरेको छ, जसलाई थाहा पाएपछि सबै बुबाआमाले सोचे हुन्छ, विभिन्न ठाउ�मा सञ्चालन गरि�दै आएको रोटेपिङमा बच्चालाई घुमाउनु भनेको फोकटमा खतरा निम्त्याउनु हो । गत शुक्रबार चर्चित कलाकार कृष्णमुरारी ढुंगेलका छोरा र त्रिवि शिक्षण अस्पताल, इमर्जेन्सी विभागका डा. रमेश आचार्यका छोरा दुईभाइ मिलेर भृकुटीमण्डपमा रोटेपिङ खेल्न गए । खेलिसकेर ओर्लिने क्रममा दुवै खुट्टा भुइमा झारिनसक्दै पिङले डा. आचार्यका १९ वर्षे छोरालाई माथि लग्यो र हुत्याइदियो । करिब ८० किलो तौल भएका किशोर पिङको तीन�चार ठाउ�मा बजारि�दै भुइ�मा खस्दा कम्मरदेखि तिघ्रासम्मको भाग च्यातिनुका साथै फियो फुटेर शरीरभरि रगतको पिच्कारी छुट्यो । संयोगवश माओवादी बैठकको निगरानीका लागि छेवैमा राखिएको प्रहरी भ्यानमा रहेका प्रहरीले थाहा पाई तत्कालै पर्खाल नाघेर उनलाई १० मिनेटमै छेवैको मोडल अस्पताल पु�याए । तत्काल अप्रेसन नगरे बा�च्न नसक्ने स्थिति थियो, डा. रमेश आफै� भनिरहेका थिए� आशा गर्ने ठाउ� छैन । उनलाई करिब २० जना सर्जन मिलेर तत्कालै अप्रेसन गरे । बिहीबारदेखि भेन्टिलेटरविनै आफै� सास फेर्न थालेका उनले जीवनदान पाएका छन् र हिजोदेखि खतरामुक्त अवस्थामा आएको डाक्टरहरूले बताएका छन् । स्रोत भन्छ, डाक्टरकै छोरो भएकाले मात्रै, सर्वसाधारणका छोराछोरी यस्तोमा परेको भए बा�च्ने आशै थिएन ।
स्रोतका अनुसार यो घटनापछि पीडितको जाहेरीका आधारमा पिङ सञ्चालकमध्येका ६ जनालाई प्रहरीले पक्रेर पिङ बन्द गराएको छ । यो रोटेपिङ कांग्रेस नेता पाल्तेन गुरुङका भाइ टेकबहादुरले ठेक्कामा लिएका हुन् । पछि उनीहरूबाट कमिसन खा�दै छैटौ� तहलाई बेचिएको रहस्य प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।
बालबच्चा र किशोर�किशोरीका लागि खेल्ने स्थानको अभाव रहेको राजधानीमा रमाइलो मेलाका रूपमा पैसा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित यस्ता पिङ बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण छन् भन्ने शिक्षा यो डरलाग्दो दुर्घटनाले दिएको छ । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम